Ihowuliseyili Ihowuliseyili Cyperus oyile kubalulekile rotundus mveliso oyile kunye nabenzi | HaiRui
I-oyile yeCyperus yeoyile ebalulekileyo yeoyile ebalulekileyo
ioyile eyimfuneko yerotundus
Ulwelo olumdaka ngebala
Mthubi mthubi mthubi
1.25kg Fibre Drums kunye neeplastikhi zangaphakathi ezimbini Igubu le-GI le-50kg / 180kg umnatha. 3. Njengoko imfuneko abathengi '.
I-1.25kg Fibre Drums eneeplastiki zangaphakathi ezibini
2. Iigubu ze-GI ezingama-50kg / 180kg umnatha.
3. Njengoko imfuneko abathengi '.
Iiyure ezingama-48 zesampulu / iintsuku ezi-7 ngokuchasene nediphozithi yemveliso yebhetshi
Igama Umba: I-oyile yaseCyperus kwioyile eyimfuneko yokubola kweoyile ekukhupheni kweHerbal
-ICyperus Rotundus Linn Ioyile eshinyeneyo kunye ne-amber ukuya kulwelo oluntsundu, ivumba elineenkuni
Umxholo weoyile weCyperus Rotundus Linn: cyperus rotundus L.en, cyperus rotundus alcohol, kunye nezinye cyperone
-Cyperus Rotundus Linn Ioyile esetyenziselwa isepha, iziqholo, izinto zokuthambisa, ivumba elimnandi, ukutya kunye newayini ukunambitheka, irhasi efanelekileyo yezonyango, kunye nokuya exesheni, isiphumo sokuthomalalisa iintlungu
-Cyperus Rotundus Linn Ioyile esetyenziselwa unyango lweengxaki zesisu
-Cyperus Rotundus Linn Ioyile .Iphucula imeko kunye nokususa uxinzelelo, ilawula ii-mens, ikhuthaza ukujikeleza kwegazi, idlulisa imfuza kwisibindi sempuku.
Imveliso yethu ephambili:
I-oyile yejinja, i-oyile yekhephu, ioyile yegalikhi, ioyile ye-Anise, ioyile yeLemon, ioyile yembewu yeFlakisi, ioyile yeAlmond emnandi, ioyile yentsholongwane yengqolowa, ioyile yePrimrose yangokuhlwa, ioyile yeBorage, ioyile yePatchouli, ioyile yeLavender, ioyile yeEucalyptus, ioyile yeCinnamon, ioyile yePerilla, iReishi ioyile yespore, ioyile yeChili, ioyile yemore, ioyile yomthi weti, iSalwoodwood ioyile, ioyile yeOregano, iCarvacrol, ioyile yeSpearmint, iUrsolic Acid, iBorneol, ioyile yeAloe kunye neoyile yeGinseng njalo njalo.
I-2years xa iqhubekekile
Elungiselelweyo Brand kunye Ilogo: Iyafumaneka
Ifomula entsha eneziphumo ezithile
Iphakheji eyenziwe ngokwezifiso, ivolumu, ilogo
Ii-odolo ze-2.OEM / i-ODM zamkelekile.
3.Singakunika iimveliso zethu ngexabiso elikhuphisanayo.
Nje ukuba ubeke iodolo kuthi, izinto zethu ziya kulandelela iodolo yakho kwaye sikwazise
Inkqubo entsha de ube uyifumene. Siya kuba ngaphezulu kwe
ndiyavuya ukukuphendula kwisithuba seeyure ezingama-24.
I-Jiang Xi Hai Rui yendalo yezityalo Co., Ltd.
Inkampani yethu ineemfuno ezizodwa ekuveliseni, ekuqhubekekeni nasekuthengiseni iioyile eziyimfuneko zendalo, ezifezekisile izatifikethi zeMSDS kunye neECA. Ngalo lonke ixesha sisabambelele kwisishwankathelo "sokusinda ngomgangatho ophezulu, phuhlisa ngokuthembeka"
Umzi mveliso wethu ugubungela i-26000 yeemitha zesikwere, utyalomali ingxowa-mali yezigidi ezili-18, ngezixhobo zovavanyo zokunyusa kunye nezixhobo zovavanyo ezahlukeneyo.
Ngaphezu koko, asikhathali nayiphi na imveliso yethu kwizilwanyana; siyi-100% yemifuno. kunye nenkampani ethanda indalo. Ke ukusikhetha sisigqibo sakho esiSengqiqweni.
1. Q: Ngaba ungumzi-mveliso okanye urhwebo? Uphi umzi-mveliso wakho?
A: Singumzi-mveliso wokulungiselela ulusu kunye nemaski ye-OEM / i-ODM, siye sazenzela kwimveliso yezithambiso ukusukela ngonyaka ka-2006.
2.Q: Ingenza ntoni inkampani yakho kubaxhasi bakho?
A: Singazenza uphando lwezixhobo, uyilo loyilo ngomthengi ngamnye olululo okanye iimfuno, senze imveliso, ukuvavanywa kwezithambiso, ukulungelelanisa ukuthunyelwa kwabaxhasi bethu.
3.Q: Singaqala njani ishishini nenkampani yakho?
A: Nxibelelana nenye yeenqununu zethu, siya kukwenzela yonke into ukusuka kokufanelekileyo ukuya kuthunyelwe. Sinokuvelisa izinto zokuthambisa ezisekwe kwiimfuno zabaxumi, iisampulu, okanye ukwenziwa.
4, kutheni le nto kufuneka sikhethe iimveliso zenkampani yakho?
Ngenxa yokuba inkampani yethu ibiza ixabiso ngexabiso ngelixa ibalaseleyo kumgangatho, inamaqela athengisa kakhulu kwaye noxanduva, samkele kwaye sinconywa ngabathengi bethu, kwaye siya kuqhubeka nokubonelela ngenkonzo enyanisekileyo, eyona mgangatho uphezulu kunye namaxabiso afikelelekayo, ukusebenzisana nawe kuphuhliso lwexesha elizayo kunye nenkqubela phambili. Ndiqinisekile inkampani yethu lukhetho lwakho olusengqiqweni!
Egqithileyo Ukuphulukisa izisombululo iHDPE Ibhotile yokupakisha yeoyile yeklorofili yeoyile
Okulandelayo: Ixabiso leBhlok lokutya kwiBakala leNdawo yeChili yeoyile
I-oyile ebalulekileyo ye-Basil
IPatchouli yeoyile ebalulekileyo
I-Thyme Ioyile ebalulekileyo
Ilebheli yabucala ephezulu ye-6 yeAromatherapy eQhelekileyo yeeoyile Esse ...
I-Organic yeVirgin yaseMorocco yokuNakekelwa kweenwele zeArgan yeoyile
Umgangatho ophezulu we-L-menthol yendalo ngexabiso elininzi
Ukucoceka kweenwele kwe-OEM kweOrile
Ixabiso lexabiso leFektri yokuThengisa iMedical Grad ...